Xilliga Kama Dambeysta ah: 2021 McKnight Scholar Awards
Codsiyada loogu talagalay Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund' ee Abaalmarinta Aqoonyahannada Neuroscience Abaalmarinta Janaayo 4, 2021
Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund for Neuroscience' wuxuu taageeraa cilmi baaris casri ah oo loogu talagalay in sayniska loogu dhawaado maalinta cudurrada maskaxda si sax ah loo ogaan karo, looga hortagi karo, loona daaweyn karo. Ujeeddadan, Sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience wuxuu ku martiqaadayaa codsiyada 2021 McKnight Scholar Awards.
Tartankan, illaa lix Aqoonyahanno McKnight ah ayaa loo xulan doonaa inay helaan saddex sano oo taageero ah, laga bilaabo Julaay 1, 2021. Codsadeyaashu waa inay lahaadaan:
MD, Ph.D., ama doctorate kale oo ku habboon
Ballanta waqti-buuxa ee darajada kaaliye Professor, waana inuu ku soo shaqeeyey darajadaaas inkayar afar sano waqtiga kama dambeysta ah ee arjiga. Saynisyahannada haysta cinwaanno kale sida Professor Kaaliyaha Cilmi-baarista, Kuxigeenka Kaaliyaha Professor, Kaaliyaha Professor Professor Raadinta, Macallimiinta Booqashada ama Macallinka uma qalmaan, iyo waqtiga ku qaadashada adeegga ee darajooyinkaas lama xisaabayo afarta sano ee adeegga ee go'aaminta u-qalmitaanka.
Noqo shaqaale intramural ah sida kuwa ka shaqeeya Machadka Allen, Machadyada Qaranka ee Caafimaadka, Howard Hughes Medical Institute iyo machadyo la mid ah
Aqoonyahan kasta oo McKnight wuxuu heli doonaa $75,000 sanadkiiba 2021, 2022, iyo 2023. Lacagaha waxaa loo isticmaali karaa qaab kasta oo sahli kara horumarinta barnaamijka cilmibaarista Aqoonyahanka, laakiin looguma bixin kharash aan toos ahayn.
Guddi dib-u-eegid ayaa qiimeyn ku sameyn doona dalabyada waxayna ku casuumi doonaan dhowr xul si ay ula wareystaan guddiga. Codsadeyaasha la xushay waxaa la ogeysiin doonaa dhamaadka bisha Maarso. Wareysiyada waxaa loo qorsheeyay Khamiista, Abriil 22, 2021 magaalada New York haddii safarka lagula taliyo; haddii socdaalku uusan kugula talin, waxaan jadwal u sameyn doonnaa wareysiyada zoom. Guddigu wuxuu markaa ka dib u soo jeedin doonaa musharixiinta Golaha Maamulka ee Sanduuqa Dhaqaalaha si loo gaaro go'aanka ugu dambeeya. Abaalmarinta waxaa lagu dhawaaqi doonaa dabayaaqada Maajo 2021.